Waxaan ka exFAT Drive soo kaban karto, Files?
Waxaan formatted aan USB flash 16GB drive nidaamka exFAT qalad ah. Nasiib ayaan ku kaydsan qaar ka mid ah waraaqaha ganacsiga aan ku yaal la gurmad. Waxaan u baahanahay inaan dib ugu soo laabtay exFAT drive in aad u hesho sida ugu dhakhsaha badan aan awoodo. Ma leedahay wax soo jeedin? Best xiriira.
Sababtoo ah ee ku habboon habka ay labada kombiyuutarada Windows iyo Mac iyo qaababka taageerada file waaweyn, nidaamka exFAT ayaa si weyn loo isticmaalaa in lagu kaydiyo weyn warbaahinta sida USB flash drive iyo drive dibadda adag. drive exFAT waa u fududahay in uu kaydiyo faylasha la size ka mid ah in ka badan 4GB. Si kastaba ha ahaatee, xogta ku wadid aad exFAT weli lagu lumin karaa sababtoo ah tirtirka, formatting drive, Baadi nidaamka, weerar virus ama la wado musuqmaasuqa. Si kastaba, ilaa iyo inta xogta laga badiyay ku wadid aad exFAT aan overwritten by xog cusub, tahay badan tahay in ay iyaga soo ceshano iyadoo la kaashanayo barnaamijka soo kabashada xogta drive exFAT aad.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa qalab sida taas oo ka caawisa in aad ka bogsato lumay, tirtiray, formatted ama kharribeen xogta ka drive exFAT / xijaab ah a. Muuqaaladan soo kabashada awoodda barnaamijkan aad u saamaxaaya in ay dhammaan noocyada file ka wadid aad exFAT, oo ay ku jiraan videos, files audio, sawiro, iwm
Waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah barnaamijka ay u soo celiyaan xogta drive exFAT hadda!
Kabsado Xogta laga exFAT Drive in 3 Talaabooyinka
Hadda waxaan adkayn doonaa kabashada xogta drive exFAT adigoo isticmaalaya Windows version of Wondershare Data Recovery. Version Mac aad u leedahay howlgalka la mid ah.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ka soo kabsado xogta ka exFAT drive ah
Ka dib markii barnaamij Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad heli doontaa interface ah soo socda, taas oo 3 hababka soo kabashada ayaa la soo bandhigay.
Inuu ka soo kabsado tirtiray, formatted, lumay ama kharribeen files ka wadid aad exFAT, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 Sawirka wadid aad exFAT
Halkan kaliya u baahan tahay in aad dooratid baabuur aad exFAT furmo oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan baadhista files waxa on.
Fadlan dooro "exFAT" nidaamka ee "File System Previous" furmo.
Haddii aad ku socoto inuu ka soo kabsado xogta laga kaydinta warbaahinta la nidaamka exFAT, waxaad u baahan tahay in aad hubiso in la si fiican u garan karaa computer safar.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka exFAT drive
Files helay ku wadid aad exFAT lagu qori doonaa "Nooca File" ama "Jidka" category ka dib markii iskaanka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file si loo hubiyo in xogta aad badiyay la aan dib ula karo ama.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad calaamadeyso faylasha aad doonaysid in aad ka soo kabsado wadid aad exFAT oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on xijaab your computer ee.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga exFAT Drive